देशमा प्रतिगमनको विजारोपण भयो – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
देशमा प्रतिगमनको विजारोपण भयो
लेखक : कृष्ण पहाडी, मानवअधिकार नेता
बैशाख ८ काठमाण्डौं । देशमा प्रतिगमनको विजारोपण भयो । मेरो विचारमा प्रधानमन्त्री ओलीजी मेडिकल्ली नै फिट र फाइन हुनुहुन्न । र, उहाँले संयम गुमाउनुभएको छ । यो प्रतिगमनको बिजारोपण हो र यसले स्वेच्छाचारिता बढाउँछ र संसदीय लोकतन्त्रलाई किस्ता–किस्तामा समाप्त गर्छ । किनभने, प्रधानमन्त्री मेडिकल्ली नै फिट र फाइन हुनुहुन्न ।
प्रधानमन्त्रीले होस गुमाउनुभएकै हो । उहाँले के गर्दैहुन्हुन्छ भने मलई फाल्ने हो भने संसद विघटन गर्दिन्छु भनेर ब्ल्याकमेलको राजनीति शुरु भएको हो यो । यो बेलामा फुत्त फाल्ने हो ०५९ साल सुरु हुन्छ । अनि, सेनाले कता लान्छ ठेगान छैन ।
प्रधानमन्त्रीले निर्वा्चित संरचनालाई बाधक ठान्न थाल्नुभयो र यो कोरोना क्राइसिसलाई देखाएर सत्तामा अनन्तकालसम्म बरिाख्ने प्रधानमन्त्रीको अभिष्ट हो । र, उहाँले संयम गुमाउनुभएको हो ।
उहाँ आफूलाई मिडियाले चिर्थोयो, सामाजिक सञ्जालले चिर्थोयो भन्नुहुन्छ, तर तपाईले हेर्नुहुन्छ भने उहाँ मेडिकल्ली फिट एण्ड फाइन हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? यो प्रश्न त सोध्नुपर्छ । यसबेला चुकियो भने हामी सधैं चुक्छौं । त्यसपछि लोकतन्त्र त खोलैखोला जान्छ ।
यो समय राष्ट्रिय सहमतिको हो । अध्यादेश नेकपाका लागि नभएर राजपा वा समाजवादीतर्फ लक्षित गरेर ल्याइएको भनिए पनि यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन
पहिलो कुरा त यो स्वेच्छाचारिताको सुरुवात हो । यसले किस्ता किस्तामा लोकतन्त्रलाई खान्छ । यसले संसदीय लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्छ । र, अब प्रधानमन्त्रीबाट ब्ल्याकमेलको राजनीति शुरु भयो । भय दोहनको राजनीति सुरु भयो । यो प्रतिगनम उन्मुख कदम हो, यसको सबैले विरोध गर्नुपर्छ ।
यी जुन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जसरी हतार–हतार उहाँहरुले मिलेर पारित गर्नुभयो, यो प्रतिगमनको बिजारोपण हो । प्रतिगमनको बिजारोपण भइसक्यो, अब यो कहाँ गएर टुंगिने हो ।
यो अध्यादेश नेकपाका लागि नभएर राजपा वा समाजवादीका लागि ल्याएको हो भनिए पनि यसो औचित्य पुष्टि हुँदैन । अहिले त राष्ट्रिय सहमतिको बेला हो । सबैले आफ्नो ऊर्जा कोरोनाको नियन्त्रणमा खपत गर्नुपर्ने बेला हो ।
राजपा र समाजवादी दल त के, कांग्रेस पनि कुनै पनि संसदीय राजनीतिमा चुनौती दिन सक्ने एउटा कुनामा पनि छैनन् अहिले । प्रधानमन्त्री ओलीलाई खतरा कोबाट छ ? जनताको विद्रोहबाट छ ? छैन । सेनाबाट छ ? छैन । विपक्षी दलहरुबाट छ ? छैन । संसदबाट पनि छैन ।
उहाँकै पार्टीबाट संसदीय दलको नेता फाल्छन् भने त्यो त संसदीय दलको सर्वा्धिकार हो । संसदले फाल्यो भने त्यो संसदको सर्वा्धिकार हो । त्यसमा न पत्रकार, न मानवअधिकारवादी, कसैले पनि केही गर्न सक्दैनन् ।
आफैं एक्लिएँ भनेर भए नभएका कृत्य गर्दै जाने, अनि संसदीय लोकतन्त्रलाई दाऊमा लगाएर प्रतिगमनको बिजारोपण गर्ने ? यो त अपराध हो । यो अपराध हो भन्न हामीले छुटायौं भने लोकतन्त्रप्रति अनर्थ हुन्छ ।
अहिले जे छ, सबै नेकपाभित्र छ । यो नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षको परिणाम भयो भने पनि यो उहाँहरुको आन्तरिक मामिला हो । तर, आफ्नै दलभित्र म अल्पमतमा पर्दैछु या परें भनेर आफ्नै सांसदहरुलाई अविश्वास गरेर यो बेलामा दल विभाजनलाई बढावा दिने गरी क्रय–विक्रयको अब सुरुवात भयो । क्रय–विक्रयलाई बढावा दिने गरी निर्णय भएको छ, त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ ।